Fanamby noho ny fahatsapana lavitra an-dranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Ny Remote Sensing ao amin'ny tontolo an-dranomasina dia manana karazana fanamby manokana raha oharina amin'ny fahatsapana lavitra an-tanety. Ohatra, ny velaran'ny rano, ny halalin'ny rano ary ny hazavan'ny rano (turbidity) dia misy fiantraikany amin'ny fidiran'ny hazavana.
Fanamby telo amin'ny toeram-ponenana an-dranomasina any ambanivohitra lavitra toy ny haran-dranomasina sy ahidrano. Sary © Fitaovana fitaovam-pandrefesana lavitra
Ity sary etsy ambony ity dia mampiseho lalan-jiro roa mamakivaky ny rano:
Ny lalana eo ankavia mampiseho ny fiovan'ny hazavana eny ambonin'ny rano (glint). Ny jiro dia miditra amin'ny rano amin'ny zoro (réfraction). Miparitaka hazavana noho ny rano sy ny sombin-javatra hafa ao anaty rano ary koa ny tsanganana amin'ny rano (halaliny). Arakaraky ny hidiran'ny hazavana no vao mainka mihalebaka. Ny hazavana dia aparitaka amin'ny vodin-dranomasina any ambany ary azon'ny sensor passif amin'ny fiaramanidina.
Ny lalana eo ankavanana mampiseho ny jiro miditra amin'ny rano amin'ny zoro (réfraction), ny vokatry ny fanaparitahana noho ny halaliny (halaliny) ary ny fihoaran'ny rano (mazava ny rano) miteraka fahazavana atenuation. Ny hazavana dia averina mivoaka any ambany miaraka amin'ny ahidrano ary azon'ny sensor passif amin'ny zanabolana.
Fitaovana fanamoriana lavitra
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana fanamoriana lavitra, novolavolain'i Dr. Chris Roelfsema sy Dr. Stuart Phinn ao amin'ny University of Queensland, dia fitaovana iray hanampiana ireo mpitantana, mpahay siansa ary teknisiana miasa amin'ny tontolo an-dranomasina, an-tanety, ary ny atmosfera mamakivaky ireo fanambin'ny fitsapana lavitra ary misafidy ireo fitaovana tsara indrindra ho an'ny scenario samihafa.